Dilka loo geestay Ibrahim Afghani iyo Macalin Burhaan muxuu ka badali karaa jiritaanka Al-shabaab ??. |
Dilka loo geestay Ibrahim Afghani iyo Macalin Burhaan muxuu ka badali karaa jiritaanka Al-shabaab ??.
Dilka Ibraahim Xaaji Jaamac Miicaad (Ibrahin Afgan) iyo Cabdixamiid Xaashi Colhaye (Macalim Burhaan0 ayaa ah mid saameyn weyn ku reebi doona kooxda Al Shabaab hadii aysanba noqon mid burburisa kooxdaasi, maadaama labada nin ay qeyb ka ahaayeen tiirarka ay kooxdaasi ku taagneyd.
Ibrahim Afghani oo lagu tilmaami jiray xubnaha ugu waayo aragsan AL Shabaab ayuu Maraykanka ku doon doonayey 5 milyan oo dollar, wuxuuna ahaa xubin xiriir toos ah la leh Al Qaida iyo kooxaha kale ee Jihaadiyiinta ah, wuxuuna ahaa nin si weyn u aaminsan Jihaadka Caalamiga ah. Arrintan ayaa loo aaneenayaa inay sabab u tahay fikirka ay isaga horyimaadeen Amiirka Al-Shabaab Sheekh Muqtaar Abuu Zubeyr sidoo kale loo yaqaan Axmed Godane.
Ibrahim Afghani ayaa difaacay raga Ajaanibta ah ee loo yaqaan Muhaajiriinta oo iyagu ku dhaliilay Axmed Godane inuu ku mashquulay siyaasad arrimaha gudaha ee Soomaaliya isla markaana illaaway jihaadkii Caalamiga ahaa, Afghani ayaa sidoo kale isku dayey inuu badbaadiyo xubno kamid ah Muhaajiriinta oo uu kamid yahay Abu Mansuur Al Amiriki oo uu xukun dil ah ku xukumay hogaamiyaha Al Shabaab.
Ibrahim Saylici ayaa tilaabadii ugu danbeysay oo uu qaaday ahayd qoraal uu u diray hogaamiyaha Al Qaida ee Ayman Al Zawahiri qoraalkaasi oo uu ku cambaareenayey Axmed Godane kuna codsanayey in ay Al Qaida soo dhexgasho xiisada ka dhextaagan Al Shabaab, qoraalkaasi ayaa waxaa sidoo kale la saxiixay Mukhtaar Robow Abu Mansuur iyo Xassan Daahir Aweys, arrintaasi oo uu Axmed Godane si weyn u dhibsaday.
Macalim Burhaan ayaa isaguna kamid ahaa xubnihii sida weyn uga qeyb qaatay dhanka wacyi gelinta dhalinyarada u dagaalanta Al Shabaab, waxaana la rumeysan yahay inuu kaalin weyn ku lahaa dhalinta ka tagtay wadamada reer Galbeedka ee ku biirtay Al Shabaab, ninkan ayaa la sheegay in bilihii lasoo dhaafay uu kamid ahaa xubnaha sida weyn uga soo horjeeda Axmed Godane.
Dhinaca kale Axmed Godane ayaa isku dayey inuu qariyo dilka Ibrahim Afghani iyo ragga kale oo uu gacanta ku dhigay, waxaa mar hawada laga saaray isgaarsiinta Baraawe, waxaa sidoo kale amaro uu dul dhigay kooxaha dhanka Warbaahinta uga shaqeeya Al Shabaab oo uu ku amray inaysan ka hadli karin hawlgalkii ay ciidamadiisa ka sameeyeen magaalada Barawe.
Xogta ugu danbeysay ee dilka raggan ayaa laga helay Xaasaskooda oo loo sheegay inay raggii qabay la dilay isla markaana ay asaysaartaan. Haweenkan oo ku sugan Barawe ayaa waxaa guryahooda ugu tagay qaar kamid madaxda Al Shabaab ee qaabilsan gobalka Shabeelada Hoose oo u xaqiijiyey in xukun dil ah lagu fuliyey labadaasi hogaamiye ee Ibrahim Afghani iyo Macalim Burhaan.
Waxaa isaguna weli baadi goobayaa Mukhataar Robow oo warar badan sheegayaan in la isku heysto dilkiisa maadaama ay maleeshiyaad badan oo kamid ah Al Shabaab ay kasoo jeedaan beesha hogaamiyahaasi, halka Ibrahim afghani oo kasoo jeeda gobalada Waqooyi uu waayey gacan militari oo ka difaacda duulaankii uga yimid Axmed Godane oo aan horey loo fileyn inuu ku tilaabsan doono weerar noocaan ah oo uu ku beegsado hogaamiyaasha Al Shabaab ka tirsanaa.
Waxaa iyaguna weli duurka ku jira kooxo Ajaanib ah oo la sheegay inuu isaguna kamid yahay Abu Mansuur Al Amiriki oo la sheegayo inuu weli nool yahay kuwaasi oo la sheegay inay ku guuleysteen in ay iska difaacaan weeraro uga yimid xoogaga Al Shabaab.
Arrimahan soo baxaya ayaa u muuqda kuwo uu Axmed Godane ku doonayo inuu awoodiisa ku adkeeyo balse dadka odorasa kooxda Al Shabaab ayaa ku tilmaamay xiisada hada ka dhex taagan Al Shabaab tii ugu xooga badneyd oo soo dhexgasha kooxdaasi xili ay kooxdaasi sii dhumineyso gobalo badan oo kamid ah koonfurta dalka Soomaaliya.